DP-8030 လျှပ်စစ်အလှအပအိပ်ရာ (မော်တာတစ်လုံး)
DP-8030 လျှပ်စစ်အလှအပအိပ်ရာ (မော်တာတစ်လုံး) DP-8030 ရိုးရှင်းသောအနှိပ်ကုတင်ကုတင်၏စျေးနှုန်းမှာအဘယ်နည်း? ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းသည် ဆက်၍ တိုး။ ကျယ်ပြန့်လာသည်, ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များနှင့်စျေးကွက်များတွင်ရူပကုထုံးကုတင်၏အမှတ်တံဆိပ်ရှိလိမ့်မည်. ပြည်သူလူထု၏မေတ္တာကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်, Dongpin အသစ်…
DP-8131 လျှပ်စစ်အလှအပအိပ်ရာ (မော်တာနှစ်ခု)
DP-8131 လျှပ်စစ်အလှအပအိပ်ရာ (မော်တာနှစ်ခု) DongPin သည်အလှအပမျက်နှာကုတင်များကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်လုပ်ဆောင်သည်. သင်၏စတူဒီယို / ဆေးခန်းအတွက်မှန်ကန်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ! လျှပ်စစ်အိပ်ရာများမှာဆူညံသံကင်းသောမော်တာများပါရှိသည်3နှစ်အာမခံ. လျှပ်စစ်မဟုတ်သောကုတင်များသည်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
အလှပြင်ဆိုင်များအတွက် DP-8222 ဟိုက်ဒရောလစ်အလှအပအိပ်ရာ
DP-8222 အလှပြင်ဆိုင်အတွက် Hydraulic အလှအပအိပ်ဆောင် DongPin သည်အလှအပနှင့်ဖက်ရှင်အမျိုးမျိုးအတွက်အလှအပမျက်နှာကုတင်များကိုပေးသည်. သင်၏စတူဒီယို / ဆေးခန်းအတွက်မှန်ကန်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ! လျှပ်စစ်အိပ်ရာများမှာဆူညံသံကင်းသောမော်တာများပါရှိသည်3နှစ်အာမခံ. လျှပ်စစ်မဟုတ်သောကုတင်များသည်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။